ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ကျော်ရဲအောင်နဲ့ မေသဉ္ဇာဦးတို့နဲ့ ကြော်ငြာရိုက်ကွင်းပေါ်က အမှတ်တရလေးတွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ နက္ခတ် – Suehninsi
တည်ကြည်ခန့်ညားလွန်းတဲ့ မင်းသားချောလေး နက္ခတ်ကို ပရိသတ်တွေက ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ နက္ခတ်ကတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ ကာရိုက်တာကို စိတ်ထဲနှစ်ကာ ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ မင်းသားချောလေးတစ်လက်ပါပဲနော်။ သူရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲတွေဟာဆိုရင်
“ချစ်ရပါသောနွေ၊ ကျွန်တော်အမုန်းဆုံးကျွန်တော်…. စတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသားတစ်လက်အဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရင်း ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကြောင့် အောင်မြင်လာတဲ့ သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ နက္ခတ်ရဲ့အချစ်ရေးဟာဆိုရင် တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုတွေနဲ့ယုံကြည်စွာတည်ဆောက်ထားတဲ့ အချစ်ရေးလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါပဲနော်။ သူကတော့
ပရိသတ်တွေနဲ့ အဆက်မပြတ်သွားအောင် အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ဗီဒီယိုလေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီနေ့မှာလည်း နက္ခတ်က“မြန်မာ့သြဘာ TVCရိုက်ကွင်းအမှတ်တရ”လို့ဆိုပြီး ဝါရင့်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးဖြစ်ကြတဲ့ ကျော်ရဲအောင်နဲ့ မေသဉ္ဇာဦးတို့နဲ့အတူ
ရိုက်ကူးထားတဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာပေါ်မှာ တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် နက္ခတ်ရဲ့ TVCရိုက်ကွင်းအမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပြန်လည်ပြီးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ပရိသတ်ကြီးကလည်း နက္ခတ်ကို အားပေးချစ်ခင်တယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်လေး တစ်ခုလောက်ရေးပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။
တညျကွညျခနျ့ညားလှနျးတဲ့ မငျးသားခြောလေး နက်ခတျကို ပရိသတျတှကေ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ နက်ခတျကတော့ ဇာတျလမျးတှဲတှရေဲ့ မတူညီတဲ့ ကာရိုကျတာကို စိတျထဲနှဈကာ ပီပွငျစှာသရုပျဆောငျနိုငျတဲ့ မငျးသားခြောလေးတဈလကျပါပဲနျော။ သူရဲ့ဇာတျလမျးတှဲတှဟောဆိုရငျ
“ခဈြရပါသောနှေ၊ ကြှနျတျောအမုနျးဆုံးကြှနျတျော…. စတဲ့ ဇာတျလမျးတှဲတှမှော ခေါငျးဆောငျမငျးသားတဈလကျအဖွဈသရုပျဆောငျရငျး ပရိသတျတှရေဲ့အားပေးဝနျးရံမှုကွောငျ့ အောငျမွငျလာတဲ့ သူတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ နက်ခတျရဲ့အခဈြရေးဟာဆိုရငျ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျနားလညျမှုတှနေဲ့ယုံကွညျစှာတညျဆောကျထားတဲ့ အခဈြရေးလေးကိုပိုငျဆိုငျထားတာပါပဲနျော။ သူကတော့
ပရိသတျတှနေဲ့ အဆကျမပွတျသှားအောငျ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့ ဗီဒီယိုလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာလညျး နက်ခတျက“မွနျမာ့သွဘာ TVCရိုကျကှငျးအမှတျတရ”လို့ဆိုပွီး ဝါရငျ့မငျးသားနဲ့မငျးသမီးဖွဈကွတဲ့ ကြျောရဲအောငျနဲ့ မသေဉ်ဇာဦးတို့နဲ့အတူ
ရိုကျကူးထားတဲ့အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို လူမှုကှနျယကျစာမကျြနှာပျေါမှာ တငျလာခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ပရိသတျတှအေတှကျ နက်ခတျရဲ့ TVCရိုကျကှငျးအမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေို ပွနျလညျပွီးမြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။ ပရိသတျကွီးကလညျး နက်ခတျကို အားပေးခဈြခငျတယျဆိုရငျ မှတျခကျြလေး တဈခုလောကျရေးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော။